जलवायु परिवर्तन : पानीको खोजीमा बसाईँ सर्नु पर्ने वाध्यता – माहुरी . Bee
प्रवासिनु पर्ने अबको कारण जलवायु परिवर्तन हुनेछ, जलवायु परिवर्तनकै कारण बैदेशिक रोजगारी र खाध्य सुरक्षाका क्षेत्रले समेत प्रतिकुल परिस्थितिको सामना गर्नुपर्ने अवस्था आउँदैछ ।
गएको जुन महिनामा राजस्थान, दिल्लीको तापाक्रम एक्कासी ४८ देखि ५० डिग्रिसम्म पुग्यो। खेतीपाती सुके, चौपाया मर्न थाले, मानिसलाई पिउने पानी कै अभाव भयो। यहि कारणले कैयौं गाउँवासिहरुलाई आफ्नो वासस्थान छाडेर सुरक्षित स्थानमा सर्नुपर्ने अवस्था आयो।
भारतकै श्रीनगर गाउँकी उषा जादव भन्छिन– हामीले ट्वाइलेटमा दिसा-पिसाव गर्न छाडेका छौं। हाम्रालागि अब ट्वाइलेटमा दिसा-पिसाव गर्नु भनेको विलास जस्तै भएको छ। प्रत्येक दिन कन्टेनरमा ल्याएको पानी किनेर ट्वाइलेट फ्लस गर्न असम्भव भयो। हामी खासगरी महिलाले दिसा-पिसाव गर्न अँध्यारो रातलाई कुर्नुपर्ने भएको छ ताकि कसैले पनि खुला ठाउँमा सौचालय गरेको नदेखुन। यसरि, एकातिर भारतका ग्रामिण ईलाकामा खुला दिसा मुक्त अभियान संचालमा छन भने अर्को तिर मानिसलाई जलवायु परिवर्तनले खुला ठाउँ खोज्न वाध्य पारेको छ। सुख्खा-खडेरी लागेकाले यस्तो अवस्था आएको हो। यसरि राज्यको नीतिलाइ नै जलवायु परिवर्तनले खुला चुनौती दिन थालेको छ।
कर्नाटका राज्यका ८० प्रतिशत र महाराष्ट्रका ७० प्रतिशत कृषकहरु गएको जुन महिनातिर देखिएको सुख्खा-खडेरीका कारण बाँच्नका लागि संघर्ष गरिरहेका थिए। यसले गर्दा ती गरिव किसानहरुलाई पानी भएको ठाउँ तिर बसाईं सार्नुपर्ने अवस्था आयो। मौसममा आएको परिवर्तनले निम्न आय भएको विपन्न परिवार, कृषक लगायत महिला, वालवालिका, बुढाबुढि, अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरु (जोखिममा परेका समुदाय/भल्नरेवल) पहिलो पिडित बन्न पुगे।
त्यस्तै, मार्च १४, २०१९ का दिन मोजाम्बिकको दक्षिणी भूभागमा आएको समुद्रीआँधी ईदाईका कारण १४६, ००० मोजाम्बिकनहरु आन्तरिक रुपमा विस्थापित भए र १० लाख एकड जमिनमा लगाएको खेती बिनास गरायो। उनीहरुको रोजीरोटी नै लुटियो।
विश्व बैंकका अनुसार ल्याटिन अमेरिका, सव-साहारा अफ्रीका, र दक्षिण एशियाबाट मात्रै सन २०५० सम्म प्रतिकुल जलवायुका कारण १४३ मिलियन प्रवासीहरु थपिने छन।
जल वायुमा आएको तिब्र परिवर्तनले सृजना भएको प्रतिकुल असर- पानीको अभाव, सुखा मौसमका कारण कृषिको बिनास, नदि/समुद्रको बढदो सतह, आँधीवेहरी, हिमपात लगायतका प्राकृतिक प्रकोप जस्ता कारणहरुले गर्दा बसाई सर्नु पर्ने भएको हो। जबकि, विगतमा युद्ध, द्वन्द्व र राजनैतिक पूर्वाग्रहले मानिसलाई अन्यत्र सर्न वाध्य पार्ने गरेको थियो।
मौसम परिवर्तनले मानिसको जनजिवन र व्यावसायमा प्रतिकुल असर पर्ने गर्दछ। समय मै यसको रोकथामका उपायहरु अपनाउन नसक्दा समस्या चर्किंदै गएको देखिन्छ। सन् १९९८ मा पर्यावरणीय प्रवासी समस्याको रोकथामका लागि सयुक्त राष्ट्र संघ (प्रवासीहरुका लागि अन्तराष्ट्रिय संगठन–International Organisation of Migrants – IOM) ले १००० वटा परियोजनामा लगानी गरेको थियो। तर हालै अमेरिकाको ट्रम्प प्रसाशनले पेरिश सम्झौताबाट बाहिरिने निर्णय गरेपछि वातावरणिय समस्या अरु पेचिलो र चिन्ताग्रस्त हुन पुगेको छ भने यता पर्यावरण सम्रक्षणका लागि १६ बर्षीय स्विडिस वालिका ग्रेटा थनबर्गले विश्वलाई नै झकझक्याएकि छिन, जुन अत्यन्त प्रशंशनिय छ। तर उनले संयुक्त राष्ट्र संघको यौटा कार्यक्रममा भनेकी थीइन, म जस्ता स्कुले बच्चाहरुलाई तिमीहरुले (विश्वका नेताहरुलाई इंगित गर्दै) यसरि यहाँ उपस्थित हुन वाध्य बनायौ, “तिमीहरुको यत्रो हिम्मत” (How dare you)! उनको समर्थनमा मानव सागर नै उर्लियो। तर ग्रेटाले भनिन “हामीले चाहे जस्तो सफलता मिलिरहेको छैन”। यसरि जलवायु परिवर्तनले मानविय अस्तित्व मै कहाली लाग्दो संकट ल्याउँदै गरेको भएपनि यथास्थितिवादीहरुलाई खासै पेट पोलिरहेको छैन।
खासगरी गरिवीले पिल्सिएका निमुखा जनसंख्याका लागि मौसम परिवर्तनको असर कहाली लाग्दो हुनेछ। किनभने उनीहरुका लागि चर्को मूल्यलाई धान्न सक्ने क्षमता छैन। मानिसहरु प्रतिकुल मौसमबाट जोगिन सुरक्षित स्थानको खोजीमा बसाईं सर्नेछन तर उनीहरुको न्यून आर्थिक क्षमताका कारण नयाँ स्थानमा सुरक्षित रहन पनि कठिन हुनेछ। हालै ब्राजिलको अमेजोन जंगल, अमेरिकाको क्यालिफोर्निया र अष्ट्रेलियामा लागेको भिषण आगलागीले जलवायुको तापाक्रम ह्वात्तै बडेको कुरा सुनिएको छ। अस्ट्रेलियामा अहिलेसम्मकै तातो हावा ५० डिग्रीसम्म चलेको वताईन्छ। खासगरी सुनियोजित तरिकाबाट जंगलको बिनास भएको ठाउँमा बसोवास गराउन जमिनको ब्यापारिकरणका लागि यसो गरिएको हो भन्नेहरु पनि छन। खासरी, ब्राजिलका राष्ट्रपति जाईर मेस्सीआस बोल्सोनारोलाई यस्तो आरोप लाग्ने गरेको छ। आगलागीको बिषयलाई लिएर टाइटनिक फिल्मका अभिनेता लियोनार्डो डिक्याप्रिओ र राष्ट्रपति बल्सेनारो विच आरोप प्रत्यारोप समेत भयो त्यतिमात्रै होईन मौसमी परिवर्तन कै कारण अन्तराष्ट्रिय सम्बन्धका आयामहरुमा पनि व्यापक फेर-वदल हुने निश्चित छ। त्यसैले भविष्यमा मानिसलाई बसाई सर्नु पर्ने प्रमुख कारणमा जलवायु परिवर्तन हुनेछ। आन्तरिक रुपमा त यस्तो बसाईसराई जसोतसो सम्भव होला, तर ठुला मुलुकमा देखिएको आप्रवासीहरु प्रतिको अनुदार सोच र बढदो संम्रक्षणवादि नीतिले गर्दा बाह्य मुलुकमा अवसर खोज्ने काम पनि सहज नहुने देखिन्छ।
——————यो लेख तयार पार्नका लागि अध्ययन गरिएका श्रोत सामाग्रीहरुको लिंक——————–
Tagged जलवायु परिवर्तन, जोखिममा परेका समुदाय, दक्षिण एशिया, पानीको अभाव, प्रवासी नेपाली, मोजाम्बिकको दक्षिणी भूभागमा आएको समुद्रीआँधी ईदाई, ल्याटिन अमेरिका, सव-साहारा अफ्रीका, सुखा मौसम
Previous Postमाहुरी, किसान र परदेशी
Next Postप्रवासिहरुमा खाध्य सुरक्षाको दयनीय अवस्था